Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Aljeeriya News » Algeria ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jartay Morocco
Guddiga Dalxiiska Afrika • Aljeeriya News • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Moroko News • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Goynta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Aljeeriya iyo Boqortooyada Marooko ayaa dhaqangeleysa laga bilaabo Talaadada laakiin qunsuliyadaha dal walba wuu sii furnaan doonaa.
Algeria ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jartay Boqortooyada Marooko.
Fasaxa diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Aljeeriya iyo Marooko ayaa isla markiiba hirgalaya.
Aljeeriya iyo Marooko ayaa xiriirkoodu xumaaday tobannaan sano.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Algeria Ramdane Lamamra ayaa maanta ku dhawaaqay in dalku uu xiriirka diblomaasiyadeed u jaray Boqortooyada Marooko.
"Aljeeriya waxay go'aansatay inay maanta xiriirka u jarto Boqortooyada Marooko," Lamamra ayaa ka sheegay shir jaraa'id Talaadadii, isagoo raaciyay in xiriirka diblomaasiyadeed uu sabab u yahay 'falalka cadaawadda leh' ee dalka deriska ah.
"Boqortooyada Morocco waligeed ma joojin falalka cadaawadda leh ee ka dhanka ah Algeria," ayuu yiri wasiirku.
Wasiirku waxa kale oo uu tusaale u soo qaatay taageerada Marooko ee ku aaddan in goob -jooge loo noqdo Israa’iil oo ka tirsan Midowga Afrika taas oo ka mid ah kuwa horseeday go’aanka.
Algeria iyo Morocco xiriirkoodu xumaaday muddo tobanaan sano ah, gaar ahaan arrinta Sahara Galbeed.
Goynta xiriirka diblomaasiyadeed ayaa dhaqangelaya laga bilaabo Talaadada laakiin qunsuliyadaha dal walba wuu sii furnaan doonaa, ayuu yiri Lamamra.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Morocco ayaan isla markiiba ka hadlin horumarka.
Boqorka Morocco Mohammed VI ayaa ku baaqay in la wanaajiyo xiriirka ay la leeyihiin Aljeeriya.
Aljeeriya ayaa todobaadkii hore sheegtay in dab -bakhtiyeynta dilaa ah ay ka dambeeyaan kooxo ay ku tilmaamtay “argagixiso”, oo mid ka mid ah ay sheegtay inay taageerto Morocco.
Dabka kaymaha ee Aljeeriya, oo qarxay 9 -kii Ogosto iyada oo ay jirto kulayl aad u daran, ayaa gubay tobanaan kun oo hektar oo kayn ah waxaana ku dhintay ugu yaraan 90 qof, oo ay ku jiraan in ka badan 30 askari.
Mas'uuliyiinta Aljeeriya ayaa farta ku fiiqay dabkii ka kacay dhaqdhaqaaqii gobonimo doonka ee gobolka Berber ee Kabylie, kaas oo ku fidsan xeebta Mediterranean -ka bariga caasimadda Algiers.
Masuuliyiintu waxay sidoo kale ku eedeeyeen Dhaqdhaqaaqa aayo-ka-tashiga Kabylie (MAK) inuu ku lug lahaa dabin lagu sameeyay nin si been abuur ah loogu eedeeyay gubis, dhacdadaas oo dhalisay caro.